အဘယ်ကြောင့် 90 ရက်စိန်ခေါ်မှုယူတာပဲ! - Porn တွင်သင်၏ ဦး နှောက်
အဘယ်ကြောင့် 90 နေ့ကစိန်ခေါ်မှုယူတာပဲ!
ငါ 90 နေ့ကစိန်ခေါ်မှုကိုချစ်။ ဆက်ဆက်ကြောင်းအထက်ပါကြောင်းခေါင်းစဉ်ဆနျ့ကငျြပုံရသည်။ သို့ရာတွင်ထိုသို့ဟုတ်မှန်ပါပဲ။ ကိုယ်ကြိုက်တယ်။ ဒါပေမဲ့အဲဒီမှာပြဿနာတစ်ခုဖြစ်တယ်, ငါကသတိထားမိဖို့တစ်ဦးတည်းသာမဟုတ်ဘူးသေချာပါတယ်။ အဘယ်သို့ငါ၏စကားပြောတယ် 90 ရက်အကြာမှာဖြစ်ပျက်၏ conundrum ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ပျောက်ကင်းအောင်ကုသနေကြသနည်း
ငါပိုကောင်းတဲ့ငါ့အခွအေနကေိုရှင်းပြနှင့်မျှော်လင့်ဖတ်နေတာဖြစ်ပါတယ်အကြင်သူသည်မှပိုကောင်းဆက်စပ်နိုင်အောင်ငါ့ကိုဒီနေရာမှာအချို့နောက်ခံပေးကွပါစို့။ သင်တို့ကိုတွေ့မြင်ငါ PMO နှင့်အတူဒုက္ခဆင်းရဲဖို့မျက်နှာသစ်မဟုတ်ဖြစ်၏။ ငါကြိုးစားခဲ့နှင့်အတိတ်ကာလ 90 ရက်ပေါင်းပြီးစီးခဲ့ပါပြီ။ ဒါဟာအံ့သြစရာပဲ! ငါ့အလိုရှိသမျှစိုက်ထူပြဿနာများသွားပြီ ဖြစ်. , ငါစွမ်းအင်တန်ချိန်ခဲ့, ငါတခြားလူငါ့ကိုထင်အရာကိုသတိမဲ့နေကြသည်။ ငါကြောက်မက်ဘွယ်ဖြစ်ခဲ့သည်သိတယ်။ ကျွန်မယုံကြည်ပါတယ်ရှိ၏ လူတစ်ယောက်။ ဒါကြောင့်အစာရှောင်ခြင်း-forward တစ်နှစ်အကြာတွင်နှင့်ယခုတွင်ငါသည်ရှင်းရှင်းလုပ်ကြံ feeling, ငါ့ခြေထောက်အကြားငါ့အအမြီးနှင့်အတူပြန်ကဒီစိန်ခေါ်မှုမှတွားတယ်။ အမြိုးသမီးမြားကိုမကောင်းသောအပုံရသည်, ငါသည်အဘယ်သူမျှမလှုံ့ဆျောမှုရှိသည်, PMO ယာယီငါ၏အပြဿနာများအားလုံးလက်လွှတ်လတံ့သောတစ်ခုတည်းသောအရာဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် fapping အစဉ်အဆက်သောသူတို့အားပြဿနာများဖြေရှင်းနိုင်ခြင်းမရှိပါ; ကမျှသာဒါလုပ်နေတာ၏မိစ္ဆာဂတိတော်ကိုပြည့်။ ဒါဟာရိုးရှင်းစွာအဘယ်သူမျှမပြဿနာတွေရှိပါတယ်ဘယ်မှာငြင်းပယ်တစ်ဦးနှောက်-fogged ပြည်နယ်သို့သငျသညျကိုထည့်လေ့မရှိ။ သင်မရှိတော့ပါအောင်မြင်နေတဲ့အဘယ်မှာရှိတစ်ဦးကပြည်နယ်ကျန်ရစ်သူပါတယ်။
ဒီပုံပြင်ဟာမင်းနဲ့မရင်းနှီးဘူးလားဆိုတာမသေချာပေမဲ့ဒီစိန်ခေါ်မှုကိုရင်ဆိုင်နေရတဲ့သူကိုတော့သတိပေးမှုဖြစ်သင့်ပါတယ်။ မင်းရဲ့ပန်းတိုင်တွေကဘာလဲဆိုတာအခုအချိန်မှာဆုံးဖြတ်ဖို့လိုတယ်။ သင်၏ဘဝတွင်ခဏတာခြေလှမ်းများလှမ်းလိုပါသလား - တောင်အောက်သို့ပြန်ဆင်း။ သာလျှင်တောင်ထိပ်သို့တက်ရန်လား။ ဒါမှမဟုတ်တောင်ထိပ်ကိုတက်ပြီးသင်အဲဒီကိုရောက်တဲ့အခါပျံသန်းချင်ပါသလား။ ဒါကငါ့အတွက် nofap ကိုဆိုလိုတာပါ။ ငါသည်တစ်ချိန်ကတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုဘယ်တော့မှမပြုလုပ်သင့်ကြောင်းမကြာသေးမီကသဘောပေါက်လာသည်။ အဲဒါဟာအရမ်းကိုအံ့သြစရာကောင်းပြီးသိသာထင်ရှားပါတယ်။
ကျွန်မပထမဦးဆုံး nofap စတင်ခဲ့သည့်အခါပစ္စည်းဥစ္စာနှိပ်စက်မှုမရှိအသိဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ "ဘယ်လိုတဦးတည်းဖြစ်နိုင်သည်ထပ်ခါထပ်ခါသူတို့ကိုယ်သူတို့မှမတတျနိုငျ !?" ဒါပေမယ့်ငါ့အသဘောထားကိုကျနော်ကြုံတွေ့ထားသော relapses ပြီးနောက်ပြောင်းလဲခဲ့ပါသည်။ ငါမူးယစ်ဆေးအလွဲသုံးစားသူတို့ထံမှဖြစ်ကြောင်းကိုဘယ်လိုကွဲပြားခြားနားသောကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေးပါအခါ, ငါမဟုတ်တော့တဲ့ကြည်လင်ပြတ်သားတဲ့ဂုဏ်ထူးတွေ့နိုင်ပါသည်။ ငါတော်တော်များများအပေါငျးတို့သလက္ခဏာတွေပြ။ ဤသည်ညှိုးငယ်ပေမယ့်မျက်စိဖွင့်လှစ်သည်။ ကျွန်မပထမဦးဆုံးစိန်ခေါ်မှုစတင်ခဲ့သည့်အခါ, ငါ / ပစ္စည်းဥစ္စာအကြမ်းဖက်ရန်ဤအလားတူဖြစ်ကြောင်းကိုသောမျှသာအကြံပြုချက်စိတ်ပျက်ဖွယ်ဖြစ်လိမ့်မည်။ သို့သော်လည်းငါသည်မရှိတော့နှစ်ခုခွဲထုတ်နိုင်ပါတယ်။ ငါသည်ကိုယ်အသက်ကို၏ကျန်များအတွက်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းမှရှောင်ပါလိမ့်မည်အဘယ်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ သင်ကိုယ်တိုင်ပျောက်ကင်းအောင်ကုသကြေညာတဲ့အခါမှာဒါဟာချောဆင်ခြေလျှောဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုလိုသည်မှာ "တစ်ကြိမ်" တစ်ဆယ်သို့လှည့်နှင့်ဒါပေါ်ပြီးတော့စုံတွဲတစ်တွဲလအကြာမှာသင်ညာဘက်ကျောကိုသင်စတင်ဘယ်မှာနေနားလည်သဘောပေါက်။
ငါရက်ပေါင်း 90 စိန်ခေါ်မှုကိုချစ်၏။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်ဘဝကိုပြောင်းလဲစေပြီး၎င်းသည်အလွန်ကြီးလေးသောပြproblemနာတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းနားလည်သဘောပေါက်စေခဲ့သည်။ ၎င်းကို“ သဘာဝ” ဟုထင်ရသော်လည်းပယ်ဖျက်ရန်လွယ်ကူသော်လည်းကျွန်ုပ်၏အကြံဥာဏ်မှာဤလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအလေးအနက်ထားရန်ဖြစ်သည်။ အစပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်မလုပ်ခဲ့ဘူး၊ ဒါပေမယ့်အခုငါပိုကောင်းလာပြီဆိုရင်ငါလုပ်နိုင်တဲ့အခြားဆုံးဖြတ်ချက်မရှိတော့ဘူး။ ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုကျွန်တော်ရက်ပေါင်း ၉၀ လောက်သာမဟုတ်ဘဲကျွန်တော့်ဘဝတစ်လျှောက်လုံးဆုံးဖြတ်ပါလိမ့်မယ်။
သင်ဒီမှာနေအဘယ်ကြောင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေးပါ။ ငါသည်သင်တို့ကိုကအားလုံးကိုအသိစေပြန်ရောက်သွားတယ်င့်ပြီးနောက်, ဒီ post ကိုသိသိသာသာထင်ရစေခြင်းငှါသိပေမယ့်ယခု မှစ. တစ်နှစ်။ တစ်ဦးဘဝကိုအပြောင်းအလဲအောင်ကိုချွတ်ပယ်မထားပါနဲ့။ 90 ရက်ပေါင်းရိုးရှင်းစွာကနဦးတက်သည်။
"အိုးပေါ်လာရုံတစျခုထက်ပိုကာလ" ဟာအလွန်အစွမ်းထက်အတွေးဖြစ်ပါတယ်။ သို့သျောလညျး, သငျယူ action ကို ပို. ပင်အစွမ်းထက်သည်။ သငျသညျရှောငျတစျခုစီအချိန်ပိုမိုအားကောင်းဖြစ်လာ, ဒါမှမဟုတ်သင်၌ပေးချင်းစီအချိန်အားနည်းဖြစ်လာဖြစ်စေ။
TLDR: ငါ့ post ကိုဖတ်ပါ။ ဒါဟာမိနစ်အနည်းငယ်ကြာပေမယ့်ကျွန်မလွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်လောက်ကဖတ်ပါဖူးဆန္ဒရှိရာတစ်ခုခုသည်မည်!
LINK - အဘယ်ကြောင့် 90 နေ့ကစိန်ခေါ်မှုယူတာပဲ!